အတွင်းဒဏ်ရာပျောက်တဲ့နေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » အတွင်းဒဏ်ရာပျောက်တဲ့နေ့	7
Posted by sorrow on Aug 20, 2016 in My Dear Diary |7comments
ဒီနေ့အကင်ဆိုင်က စားပွဲထိုးလေးက…ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဟင်းရည်ကို လက်ပေါ်မှောက်ချပေးတယ်
.တောင်းပန်တဲ့အသံကတုန်ပြီး အလွန်ကြောက်နေရှာတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ..ပူလောင်နာကျင်နေတာကိုမေ့ထားပြီး…..
..ညလုံးပေါက်အလုပ်လုပ်စရာရှိတဲ့လက်က ခုထိနာတာမပျောက်ဘူး ..
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ခြောက်နှစ်တုန်းက အလားတူမတော်တဆမှုကိုကျူးလွန်ဖူးတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်က စားပွဲထိုးလေးတစ်ယောက်…
ဖြတ်ရိုက်ခံရဖူးတဲ့ ဘယ်ဘက်ပါးကို ပြန်စမ်းမိတယ်…
ဦးကျောက်ခဲ says: အဲဒါ ပါးမို့လို့ … နှလုံးသားဆိုရင်တော့ အနာကျက်ခဲပြီး သေရွာပါတတ်သတဲ့…
sorrow says: ဟုတ်တယ် အစ်ကို ..နှလုံးသားကတော့ အနာကျက်ခဲတယ်..ကိုယ်တွေ့ …
kai says: ပါးရိုက်ခွင့်လည်းမရှိရသလို… ပျောက်သွားပါမှာဆိုပြီးလည်း.. သည်းခံနေဖို့မလိုဘူးထင်မိတယ်..။
ဆိုင်ရှင်ဆီမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ဆေးကုသမှုနဲ့ လျှော်ကြေးရမှဖြစ်မှာ..။
ပါးရိုက်သူရှိရင်လည်း.. ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှုနဲ့ အရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါက.. ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ အခြေအနေ…။
sorrow says: လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ့်ခြောက်နှစ် ..ဆယ်တန်းဖြေပြီးခါစမှာ… လူ့သိက္ခာကိုစော်ကားပါလားဆိုပြီး.တရားစွဲရကောင်းမှန်းသိတဲ့ ဥာဏ်ရည်မျိုး….ကိုယ့်မှာလဲမရှိ…ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲမရှိသေးဘူး သူကြီးရဲ့…ခုချိန်များကတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ..ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ပါရှိနေပြီဆိုတော့ …လုပ်ရင်လဲမခံနိုင်တော့သလို..လုပ်လဲမလုပ်ရဲတော့ဘူး….
Ma Ei says: .ဘ၀ သင်ခန်းစာတချို့ဟာ တန်ဘိုးကြီးလွန်းပါတယ်..
ကံ ဥာဏ် ၀ိရိယ ရှိသလောက် ယူတတ်ရင် အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်သလို
အယူမှားရင်လဲ အဆုံးစွန် မိုက်မဲတတ်ပြန်ရော….
လုံမလေးမွန်မွန် says: မောက်မာတတ်သူတွေကြားထဲ ကိုယ်ချင်းစာညှာတာစိတ်ဆိုတာ သိပ်ခေါင်းပါးခဲ့တယ် . . . ကိုယ်တွေနောက်က မျိုးဆက်မှာတော့ ပါလာနိုင်ကောင်းပါရဲ့
အောင် မိုးသူ says: စာအတိုလေးပေမယ့် ထိတယ်။